Masar oo sadex bilood ku kordhisay xaaladda degdega ee wadanka la geliyay – Radio Daljir
Janaayo 3, 2018 7:46 b 0
Dowladda Masar ayaa ku kordhisay muddo sadex bilood oo dheeraad ah xaaladda degdega ee wadanka lagu soo rogay, iyadoo u sababaysay arrimo ammaan.
Muddo kordhinta xaaladda degdega ee dalka Masar lagu soo rogay ayaa bilaabmaysa 13ka bishaan Janaayo, sida lagu xusay wareegto kasoo baxday madaxwaynaha Masar Cabdel Fattaax Al-Sisi , waxaana ay kusoo beegmaysaa kadib markii Jimcihii laba weerar oo lagu qaaday kaniisad ku taala magaalada Xelwaan oo koonfur kaga toosan magaalada Qaahiro.
Wakaaladda wararka ee dowladda MENA ayaa sheegtay tilbaabadan in loo qaaday arrimo ammaan, waxaana ay u ogolnaaysaa dowladda inay la dagaasho kooxaha maalgaliya argagaxisada, ilaalinta ammaanka dalka iyo inaan wax racfaan ah laga qaadan xukunada dadka ammaan xumada lagu helo.
Masuuliyiinta Masar ayaa xaalad degdeg ah geliyay wadanka oo dhan bishii April ee sanadkii hadda dhamaaday, kadib laba weeerar ay ku geeriyoodeen 45 ruux, sidoo kalena waxaa la kordhiyay mudada xaaladda degdeg laba jeer bilihi July iyo Octoober ee sanadkii hadda dhamaaday.
Kooxaha u dooda arimaha Xuquuqda Aadanaha ayaa ku eedeeyey xukuumadda Al-asisi inay sii xumaanayso xaaladda dalkaasi ka jirta tan iyo markii uu xukunka uu si afgambi ah ula wareegay Al-sisi sanadkii 2013kii, kadib in qilaab uu ku sameeyey madaxwaynihiii sida dimuqraadiga loo doortay ee Mursi.
Masar ayaa qorshaynaysa sanadkan inay ka dhacaan doorasho madaxtinimo , waxaana xiliga ay dhacayso lagu wadaa in lagu dhawaaqo todobaadyada soo socda.